UPS Amafayela patent ukwamukela Bitcoin for emalokha - Blockchain Izindaba
UPS Amafayela patent ukwamukela Bitcoin for emalokha
Global lokuthumela giant UPS obheka ngokwamukela Bitcoin ngokusebenzisa into-exchange eydijithali isevisi, ezintsha ezishicilelwe imvuthuluka patent ukukhombisa.
UPS is ibuke isimiso eydijithali amabhange ukuthi lungeza ngezindlela digital yokukhokha, ngokuvumelana isicelo ezikhishwe U.S. Patent Uphawu Office (USPTO) ngoLwesine. Ngaphezu bendabuko izinhlelo zokukhokha, nokufakwa patent ubala Bitcoin njengoba lwemali kungenzeka ukhokhe nge.
Nokufakwa ucacisa izindlela ezahlukene by abaqashayo ongakhokhela eydijithali, baphawule ngokukhethekile:
"Ngo-isibonelo embodiments, ibhange eydijithali ingafaka phuzu-of-ukudayiswa (pOS) uhlelo lokwamukela inkokhelo kusukela kubasebenzisi ngesimo: … Bitcoin; kanye / noma (5) nanoma yiluphi uhlobo efanelekayo yokukhokha. "
Ngo 2017, Ngaphezu kwe 20 imvuthuluka patent ezikhishwe USPTO okukhulunywa Bitcoin njengoba kungenzeka yokukhokhelana. Nakuba isibalo lehla kancane kusuka 2016, Ngaphezu kwe 50 imvuthuluka patent ezikhishwe ejensi e eminyakeni emibili ibonisa lo mugqa ukucabanga.
POS Crypto okudayisa ...
Umnikazi NYSE kwethulwa ...
Thumela Previous:MasterCard sika-CFO: Cryptocurrency ukuthenga ekufukuleni ikhasimende imali yethu
Thumela Landelayo:Blockchain Observatory futhi Forum Oyoletha EU "phambili" ka Blockchain Tech